टिकटकले ब्युँताएको १२ वर्षअघिकाे त्याे गीत – NawalpurTimes.com
टिकटकले ब्युँताएको १२ वर्षअघिकाे त्याे गीत
प्रकाशित : २०७७ मंसिर २७ गते ९:१५
काठमाडौं। नेपालीमा एउटा उखान छ- १२ वर्षपछि बगेको खोला फर्कन्छ।
साँच्चिकै बगेको खोला फर्कन्छ वा फर्कँदैन, त्यो त थाहा छैन। तर, राजनराज सिवाकोटीको एउटा गीत भने १२ वर्षपछि फर्किएको छ।
आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि रचना गरिएको ‘फूलबुट्टे सारी’ बोलको गीत अहिले लोकप्रिय बनेको छ। “धेरै दर्शक स्रोताले मन पराइदिनुभएको छ,” राजनले देखापढीसँगको कुराकानीमा भने।
कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा, मन मेरो हलचल भो।
टिकटकदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब जताततै यही गीतको चर्चा छ। यो गीतमा टिकटक नबनाउने कमै होलान्। त्यसमा फिमेल भर्सनको गीत बढी चर्चामा छ। युट्युबमा मेल र फिमेल दुवै भर्सनमा अलग–अलग गीत अपलोड गरिएको छ।
१४ नोभेम्बरमा गायक मार्मिक लामाको स्वरमा गीतको भिडिओ सार्वजनिक भयो। जुन गीतलाई ४० लाख ७१ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
त्यस्तै ५ डिसेम्बरमा अपलोड गरिएको गायिका मिलन नेवारमा स्वरमा रहेको फिमेल भर्सनलाई २२ लाख २६ हजार भन्दा बढी भ्यूज मिलेको छ।
तीन वर्षअघि कभर
१२ वर्षअघि रचिएको यो गीत त्यतिबेला खासै चर्चामा आएन।
गीतले राम्रो प्रतिक्रिया नपाएपछि उनीहरूले त्यो गीतलाई बेवास्ता गरे।
गायक मार्मिक लामाले गाएको यो गीत दर्शकको रूचिमा परेन। त्यसपछि तीन वर्षअघि प्रतीक गुरूङले गीतको कभर गरे। त्यो कभर पनि त्यो समय खासै चलेन। तर, अहिले उक्त कभर गीतले पनि ४२ लाख भन्दा बढी भ्यूज पाएको छ।
गीतको कभर गर्ने प्रतीकले समेत यो गीतका सर्जक को हुन ? भन्ने पत्ता लगाउन सकेनन्। पछि राजनराजले नै प्रतीकलाई सम्पर्क गरे। १२ वर्ष अगाडिको अडिओ नचले पनि प्रतीकको कभरमा दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया आयो।
“प्रतीक भाइले कभर गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई त यो मेरो गीत हो भनेर समेत थाहा थिएन। पछि मैले नै सम्पर्क गरेपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो,” राजनले भने।
जब गीतको क्लिप टिकटकमा छिर्‍यो…
जमाना टिकटकको छ। राम्रा नराम्रादेखि चर्चामा आउनु पर्ने÷नपर्नेसम्म टिकटकमा देखिन्छन्।
टिकटकमा आयो भने त्यो भाइरल नै बन्छ। हो, १२ वर्षअघिको उक्त गीत पनि दुई महिनाअघि कसैले टिकटकमा हालिदिए।
प्रतीकले गरेको कभर गीतको सानो क्लिप टिकटकमा भाइरल बन्यो। त्यो कुरा राजनलाई थाहा थिएन।
“एकजना भाइले मलाई त्यो गीत टिकटकमा धेरै चलेको छ। टिकटक खोलेर हेर्दा निकै हिट भएको पाएँ,” उनले भने, “त्यसपछि मैले दर्शकको डिमाण्डअनुसार गीतलाई पुनः रेकर्ड गर्न सकियो भने राम्रो हुने भन्दै मार्मिक लामालाई पुनः गाउन लगाएर भिडिओ बनाएँ।”
टिकटकमा चर्चामा आएपछि गीतलाई वर्तमान समय र परिवेशअनुसार उनले भिडिओ बनाए।
“गीतले निकै चर्चा बटुल्यो, समयको माग रहेछ,” उनले भने, “मैले त बिर्सिसकेको गीतलाई टिकटकले चर्चामा ल्याइदियो, अनि यसलाई फेरि ब्युँताउने योजना बन्यो।”
गायक लामा प्रायः स्टेज प्रोग्राममा यो गीत गाउँथे। तर, दर्शकले खासै नोटिसमा राखेनन्।
“गीतले भ्यालु नपाएपछि हामीले त यसलाई बिर्सिसकेका थियौं। एकाएक टिकटकमा चर्चामा आएपछि गीतलाई समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेर भिडिओ बनायौ,”राजनले भने।
अफिसिल भिडिओ हिट भएपछि…
१४ नोभेम्बरमा अपलोड भएको अफिसियल भिडिओ हिट भयो। त्यसपछि राजनको दिमागमा अर्को ‘आइडिया’ आयो। यसलाई महिलाको तर्फबाट केटाबारे कसरी भाव व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर उनले केही शब्द परिवर्तन गरिदिए।
गायिका मिलन नेवारलाई फिमेल भर्सन गाउन दिए। भिडिओमा पल शाह र मलिका महतलाई अभिनयमा गराइयो। ओरिजिनल भिडिओमा सोना लिम्बु र आनन्दसिंह दनुवारको अभिनय छ।
“मेल भर्सन एकदमै रुचाइयो। केही शब्दहरू परिवर्तन गरेर फिमेल भर्सन गर्दा एकदम राम्रो देखिने भयो। जुन दर्शकबाट डिमाण्ड पनि भयो,” उनले भने, “जस्तो कि कान्छीको केस भन्ने शब्द छ। त्यो ठाउँमा फिमेलहरूले कान्छाको केस भन्ने राखियो। यसरी शब्द परिवर्तन गरेर के हुन्छ त भनेर फिमेल भर्सनमा पनि बनाएँ।”
१२ वर्षअघिको गीत कसरी अहिले हिट भयो भन्ने प्रश्न राजन भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो कुरा समय रहेछ। समय र कम्पोजिसन मिलेपछि दर्शकले मन पराइदिनुभयो।”
अहिलेको समय नै यो गीतका लागि उपयुक्त रहेछ भन्ने उनलाई लाग्छ। “नत्र तीन वर्ष अगाडि वा १२ वर्ष अगाडि चल्नुपर्थ्याे। अहिलेको समयमा दर्शक स्रोताले यस्तो खालको गीत खोजेका रहेछन्,” उनी भन्छन्।
कसरी फुर्‍यो ‘फूलबुट्टे सारी’ ?
आफ्ना गीतहरूमा मौलिकता प्रस्तुत गर्ने राजनका अधिकांश सिर्जना गाउँघरमै गरिएका छन्।
गीतको रचना गर्न उनी दोलखास्थित घरको जंगलमा जान्छन्। घरमाथि रहेको मौवाको रूखमा बसेर उनले ‘फूलबुट्टे सारी’ सिर्जना गरे।
“युवायुवतीहरू घरको कौसी तथा बार्दलीमा बसेर श्रृंगारपटार गर्ने तथा आफ्नो यौवनलाई नियाल्ने गर्छन्। मैले धेरैपटक यो विषयलाई नोटिस गरेको थिएँ,” राजनले भने, “म काठमाडौंबाट घर जाँदा किशोरावस्थामा पुगेका युवायुवतीहरूलाई आफ्नो यौवनबारे कस्तो अनुभूति हुँदो होला भनेर कल्पना गर्दै गीत रचेको थिएँ।”
युवा अवस्थाका केटा केटीले विशेषगरी आफ्नो कपाल मिलाउने गर्छन्। त्यही भावमा आफूले गीत रचना गरेको उनको भनाइ छ।
गीत रच्ने क्रममा एउटा लाइन मिलाउन उनलाई निकै समय लाग्यो। उनले भने, “कान्छीको केस पछिको लाइन रच्न निकै लामो समय लाग्यो। डेढ महिनापछि कान्छीको केसपछिको शब्द ‘फिजारिएछ’ भन्ने शब्द मिल्यो।”